Ngoro Guru: Kushambadzira Kushandisa kweEcommerce | Martech Zone
Zvinosuruvarisa kuti ecommerce mapuratifomu haaite kuti kushambadzira kuve pekutanga. Kana iwe uine chitoro chepamhepo, hausi kuzosangana neyako izere mari kunze kwekunge iwe uchikwanisa kuwana vatengi vatsva uye nekuwedzera mukana wemari wevatengi varipo.
Nekutenda, pane rudzi rukuru rwekushambadzira otomatiki mapuratifomu kunze uko anopa zvese zvishandiso zvinodiwa kuti zvinongedze otomatiki vatengi kwavanonyanya kuvhura, kudzvanya, uye kutenga. Imwe yemapuratifomu akadaro Ngoro Guru. Ngoro Guru inopa zvese zvinoitwa kuti zviwedzere mari kubva kune wese mutengi waunotora nematanho akasarudzika, akasarudzika ekutengesa.
Ngoro Guru Zvimiro uye Bhenefiti Sanganisira
Ecommerce Kushambadzira Yekushambadzira Workflows - Ngoro Guru automated workflows inoona kuti iwe unodzingirira kumusoro kwese kutungamira uye kushandura kutengesa kwese. Mukungodzvanya mashoma iwe unogona kugadzira uye kugadzirisa makwikwi ekuzivisa, kufunga, uye epashure-ekuchengetedza matanho erwendo rwevatengi, wobva wadzvanya kuvhura uye chikuva chinotarisira zvimwe zvese.
Ecommerce Multichannel Kushambadzira Campaigns - Multichannel kushambadzira mishandirapamwe inotsvaga vatengi kwavanogona kuvhura, kudzvanya, uye kutenga. Makaroti Guru anoita kuti zvive nyore kusanganisa email, SMS, uye Facebook Messenger mune imwechete mushandirapamwe wekuwedzera kudzoka.
Ecommerce Performance Dhibhodhi - Ongorora iyo ROI yemushandirapamwe wako uye uteedzere kukura kwebhizinesi rako pane e-vatengesi dhibhodhi. Carts Guru inokupa iwe inoenderana maonero mune maodha, macampaign, webhusaiti chiitiko, uye zvimwe kuitira kuti iwe ugone kuita zvine ruzivo sarudzo uye kukura rako bhizinesi.
Ecommerce Kasitoma Chikamu - Nyore kunyorera vatengi mune akakodzera vateereri zvinyorwa pamwe nehungwaru-chidimbu.
Yakagadzirwa Codeless Ecommerce Platform Kubatanidzwa - Manage kushambadzira kweakawanda e-commerce zvitoro kubva kune imwe Carts Guru account inosanganisira Prestashop, Magento, WooCommerce, uye akawanda Shopify zvitoro.
Edza Ngoro dzeGuru mahara
Kuzivisa: Ndiri Ngoro Guru zvakabatana.
Tags: ngoro dzekusiya mishandirapamwengoro yekusiya maemailngoro kusiiwa smsngoro gurue-commerce kushambadzira otomatikiecommerce kusanganaecommerce kugovana mushandirapamweMagentoPrestashopshopifykusiya ngoro yekutengesashanyira mushandirapamwekukunda-kudzokakuhwina-kumashure mishandirapamwe